‘एनआइसीले एनबिए सदस्यता त्यागेर एक्लै हिँड्छु भन्न किन नपाउने ?’ Bizshala -
-अनलराज भट्टराई, बैकिङ विश्लेषक
बित्तीय क्षेत्र आफैंमा धेरै संवेदनशील हून्छ । सिसाको जस्तो अवस्था हुनसक्छ, जहाँबाट पनि चर्किन सक्छ र जहाँबाट पनि फुट्न सक्छ । अरु क्षेत्र डाउन भए केही फरक पर्दैन, तर बित्तीय सेक्टर डाउन भयो भने सबै इकोनोमी नै कोल्याप्स हुन्छ । यो संवेदनशील कुरा हो, संवेदनशील भएर मात्र काम गर्नुपर्छ । सजिलो उपाय हो, एनआइसीले ११ र ८ लाई मानिदियो भने इस्यूू नै रहँदैन । नमानेर म लडाई गर्छु भन्छ भने त्यसको असर २७ वटा बैंकलाई पर्दैन, असर त्यही बैंकलाई मात्र पर्छ । त्यो असर लिने कि नलिने ?
एउटा स्वयम्सेवी संगठनले अर्को कुनै संस्थालाई कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहि कानूनी कोणबाट पुष्टि भएको देखिदैन । तर, म काम गर्दिँन भन्नबाट चाहि कसैले पनि रोक्न सक्दैन । त्यसको समस्या कुन बैंकलाई बढी पर्छ त ? एउटालाई पर्छ कि २७ वटालाई पर्छ भन्ने कुरा बैंकको बोर्ड र म्यानेजमेन्टले हेर्नुपर्छ । होइन हामी २७ वटा बैंकलाई छाडेर एक्लै जानसक्छौ, त्यो क्षमता राख्छौ भन्यो भने बैंकर्स एशोसिएसनको मेम्बर हुनैपर्छ भन्ने जरुरत पनि छैन ।
खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा कसैको सिण्डिकेट मान्नैपर्छ भन्ने पनि त हुँदैन होला नि ? प्रतिस्पर्धा गर्नलाई किन नपाइने ?
-त्यही चिज हामी डलर रेटलाई चाहि किन क्वेसन गर्दैनौ त ?डलर रेट पनि फ्री गरिदिए भइहाल्यो नि । सबै बैंकले एउटै डलर रेट किन मान्ने त ? एयरलाइन्सको टिकटमा एउटै रेट किन मान्ने ? दूधको प्रयासमा हामी एउटै रेट किन मान्ने ? यो चिजमा पनि बिचार गर्नुपर्छ । डलर रेट चाहि मान्छौ, तर ब्याजदर मान्दैनौ भन्ने कुरा चाहि उचित भएन । एक किसिमले यो समस्या तथा विवाद एकपटक आउनुपर्ने थियो, अब फेरि नआओस् । यो ठूलो इस्यू हुँदै होइन ।
analraj bhattarai analysis NIC Asia Bank Limited nepal banker association